Nissan Caravan 2005 (#709809) ကို Pyinoolwin ၿမိဳ့နယ္တြင္... | CarsDB
Lot Number: #709809
-NISSAN CARAVAN ၉ယောက်စီးလေး
Price. -210 သိန်း
Model. _ 2005
Color. - Silver
Orginal kilo over 260000
မန်းလိုင်စဉ် ၂၀၂၀ ၆ လပိုင်း သက်တမ်းကုန်
Spare wheels/ ဂျိုင့်/Spanner/Tools
၇ ကွက် YMBA အနီး
JPC Car Shworoom
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) JPC Car Showroom မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Nissan Caravan 2005 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။